नेपालमा कहाँ-कहाँ बनाइँदै छ सुरुङ ? « Drishti News – Nepalese News Portal
नेपालमा कहाँ-कहाँ बनाइँदै छ सुरुङ ?
२७ असार २०७८, आइतबार ९ : ०२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मुलुकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम बढेसँगै दुई वटा लकडाउन भई कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि थला परिरहेका बेला नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण प्रगति भने गौरव गर्न लायक पाइएको छ ।
निर्माण कार्यलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउने सन्दर्भमा केही विदेशी तथा ५० नेपाली इञ्जीनियरसहित ६०० भन्दा बढी मजदुरको अहोरात्र परिचालनपछि हाल आयोजनाको समग्र भौतिक १५.९ र आर्थिक प्रगति २५.५५ पुगेको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । काठमाडौँको बलम्बुस्थित तोतीपाखाबाट शुरु भई धादिङको सिस्नेरीखोलामा पुगेर अन्त्य हुने मूल सुरुङ २५८ मिटर र सहायक सुरुङको प्रगति ४९९ मिटर पुगिसकेको छ ।
आयोजनाको शिलान्याससँगै राज्यले नेपाल सुरुङमार्गको युगमा प्रवेशको घोषणा गरेको सन्दर्भमा उक्त निर्माणको सफलताले आधुनिक सुरुङमार्ग बनाउने दिशामा स्वदेशी प्राविधिकलाई ठूलो हौसला प्रदान गर्ने छ । अहिले नै मुलुकमा सम्भावना देखिएका १७ सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययन गर्ने कार्य क्रमशः अघि बढिसकेको छ । हुन त आजभन्दा १०० वर्षअघि चन्द्रशम्शेर जबराकै पालामा थम्सन युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेर फर्किएका इञ्जीनियर डिल्लीजङ्ग थापाले हेटौँडा नजिक चुरियामा निर्माण गरेको ७६१ फिट लम्बाइको सुरुङलाई नेपालको ऐतिहासिक सुरुङ मानिन्छ । दक्षिण एशियामै सुरुङ नभएका बेला बेलायती ढाँचामा निर्माण गरिएको त्यो नेपालको पहिलो सडक यातायातका लागि बनाइएको सुरुङ १० फिट अग्लो थियो ।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा भन्छन्, “सुरुङ निर्माणपछि बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स रोकिने छैनन् । बिरामीले समयमै अस्पताल पुगी उपचार पाउने र सही उपचार पाएर बच्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । मानिसको ज्यान पैसासँग तुलना हुन सक्दैन ।”
सुरुङ निर्माणपछि समय, तेल, पार्टपुर्जाका आयुका कारण यातायात साधन सञ्चालन खर्चको कमी मात्र होइन दुर्घटना जोखिम सम्भावना पनि न्यून हुनेछ । साढे नौ मिटर चौडाइको दुई लेन रहने सुरुङको भित्री भाग यातायातका साधन बिग्रिएमा त्यसको दायाँ–बायाँबाट गाडी चलाउन मिल्ने छ । सुरुङभित्र १५ वटा पङ्खा जडान गरिनेछ । उक्त सुरुङको सफल निर्माणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सिकाइका हिसाबले पनि कोसेढुङ्गा सावित हुने महानिर्देशक थापा बताउँछन् । अप्रत्यक्षरूपमा नागढुङ्गा सुरुङ निर्माणका क्रममा रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, सिमेन्ट र फलाम उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई काम मिलेको छ ।
यो आयोजना सफलतासँगै नेपालकोे यातायात क्षेत्रको पहिलो फ्लाइओभर बन्नेछ । सुरुङबाट बाहिरिने सवारी साधनको प्रयोगका लागि काठमाडौँको बलम्बु–थानकोट क्षेत्रमा निर्माण हुने फ्लाइओभर १३० मिटर लामो हुनेछ । सुरुङभित्र आगलागी वा अरु दुर्घटनामा उद्धार गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि मूल सुरुङसँगै अर्को सुरुङ रहनेछ । त्यो पनि साना सवारी साधन नै चल्ने क्षमताको रहनेछ । सुरुङभित्रका गतिविधि अध्ययन र अवलोकनका लागि अत्याधुनिक सञ्चार, बत्तीसहित सुविधासम्पन्न नियन्त्रण तथा सूचनाकक्ष रहनेछ । प्रत्येक ३०० मिटरमा आपत्कालीन द्वारको व्यवस्था हुनेछ । सुरुङसँगै दुई अण्डरपास पुल बनाइनेछ । सुरुङ खन्दा निस्केको माटो, ढुङ्गा त्यही प्रयोग गर्न सञ्चयको व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
सडक सुरुङ निर्माणको अनुभवमा कमी, गलत ठाउँमा भएमा हुनसक्ने जोखिम, स्थानीयवासीबाट सम्बोधन गर्नै नसक्ने माग र आयोजनालाई हेर्ने गलत दृष्टिकोणलगायत केही आर्थिक, राजनीतिक र स्थानीय समस्या रहेको निर्देशक शाक्य बताउँछ्न् ।
यसकै आधारमा सिद्धबाबा सुरुङ अघि बढ्ने छ । रुपन्देही र पाल्पा सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको बोलपत्र आह्वान नै भइसकेको छ । बर्सेनि हुने पहिराका घटनामा धेरैको ज्यान गएकाले त्यसलाई रोक्न एक दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । त्यसका साथै चरिकोट–तामाकोशी–लामाबगर सुरुङ निर्माण हुँदैछ । काठमाडौँ–तीनकुने–जडीबुटी खण्डमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमुनि सुरुङ निर्माण गर्न जाइकासँग कुराकानी गरिएकामा परामर्शदाता खटाएर अध्ययन भइरहेको छ ।
खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग विपी राजमार्गको मुनि–मुनि निर्माणका लागि अध्ययन सकिएको छ । नवलपरासीको दुम्किवास–दाउन्ने–बर्दघाट क्षेत्रको पनि प्रारम्भिक सम्भव्य अध्ययन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक विभागले थप सम्भाव्य अध्ययन गर्ने छ । पाल्पाको प्रभाष–जोर्ते क्षेत्रको पनि काम भइरहेको छ ।
सरकारको २०७८र७९ को बजेटमा सिद्धबाबा, लामाबगर, धरान–लेउती सुरुङ शुरु गर्न रकम विनियोजन भएको छ । टोखा–छहरे–गुर्जेभन्ज्याङ सुरुङका लागि चिनियाँ सरकारसँग अनुरोध गरिएकामा प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । कुलेखानी–भीमफेदी चीन सरकारले अध्ययन गरेकामा उद्योगी कुशकुमार जोशीको टिमलाई नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडमार्फत पिपिपी ढाँचामा बनाउन जिम्मा दिएकामा अल्झेर बसेको छ ।
मझिमटार–शक्तिखोर–जोगिमारा निस्कने अर्को सुरुङको पनि सोच अघि बढेको छ । स्वीस सरकारको अनुदानमा गणेशमान मार्गअन्तर्गत थानकोट–चित्लाङसम्म सुरुङको अध्ययन भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा भवन अघिल्लतिर नयाँबानेश्वर चोकमा अण्डरपास बनाउन चीन र जापानसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
गौशाला–चावहिल अण्डरपासको पनि सोच अघि बढेको छ । भौगर्भिक अवस्थाका कारण पहिराबाट आक्रान्त रसुवागढी–बेत्रावती क्षेत्रमा स–साना सुरुङ निर्माण गर्न चीनले अध्ययन गरिरहेको छ । बबई–छिन्चु सुरुङ अर्को आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ । भक्तपुरको ताथली– काभ्रेरवीओ तथा विपीनगर–खुटिया सुरुङको पनि सोच छ । गोदावरी–काभे्र–मानेचौरको अवधारणा अघि आएको छ । चेपाङमार्ग–मलेखु क्षेत्रको महाभारमा सुरुङ मार्गको माग छ । तीमध्ये नागढुङ्गा, सिद्धबाबा र लामाबगर पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन् ।
जताततै अनियमितता, स्वास्थ्य लथालिङ्ग